Moto G7 Play na G7 Ike: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta | Gam akporosis
Moto G7 Play na Moto G7 Ike: ụlọ ọrụ ọhụrụ abụọ ahụ adịghị ọnụ ọnụ
Edere Ferreno | | Motorola, Mobiles
E gosipụtarala Moto G7 zuru ezu. Mgbe ụdị abụọ mbụ ahụ gasịrị, Moto G7 na G7 Plus, anyị ka na-ahụ ekwentị abụọ ọzọ. Ọ bụ oge mbụ Motorola ọnọde ekwentị anọ na mpaghara a, ebe ọ bụ na ọ dị mma maka ụdị ahụ ịhapụ anyị ekwentị atọ n’ime ya. Modelsdị abụọ ndị ọzọ, nke anyị na-ekwu maka ugbu a, Ha bụ Moto G7 Play na G7 Power.
Moto G7 Play na G7 Power bụ ụdị abụọ kachasị mfe n'ime oke a. Ha na-abịa dị iche iche imewe karịa ndị ọzọ smartphones, na mgbakwunye na-enwe a pụrụ iche n'azụ igwefoto. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla n’ime ha ruru ndị dị iche iche.
Mgbe ah Anyị na-ekwu maka ndị otu ọhụụ ọhụrụ a n'etiti etiti site na Motorola, ka i wee nweta echiche doro anya nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya n’aka ha. Anyị na-eme ya iche na ngwaọrụ ọ bụla.
1 Nkọwapụta Moto G7 Play
2 Nkọwapụta Moto G7 Ike
3 Ọnụahịa na nnweta
Nkọwapụta Moto G7 Play
Nke a Moto G7 Play rutere na ihuenyo na ọkwa ọhụụ, nke pụtara ìhè chịkọtara ihuenyo. N'ime anyị na-achọta nkọwa dị ntakịrị karịa ụdị ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọ na-eji otu nhazi ahụ dị ka Moto G7. Ma ụdịdị ndị ọzọ dị obere. Ihe ndị a bụ njirimara nke etiti a:
Nka na ụzụ nkọwa Motorola Moto G7 Play
Nlereanya Moto G7 Play
Usoro njikwa A gam akporo
Ihuenyo 5.7 sentimita asatọ na mkpebi HD + (1.520 x 720 pikselụ)
Nhazi Snapdragon 632
Nchekwa n'ime 32GB (Gbasaa ruo 512GB)
Igwefoto na-aga n'ihu 13 MP nwere oghere f / 2.0
Igwe n'ihu 8 MP nwere oghere f / 2.2
Njikọ Bluetooth 4.2 GPS FM Radio WiFi 802.11 ac 4G / LTE Dual SIM
Atụmatụ ndị ọzọ N'azụ mkpisiaka ihe mmetụta
Batrị 3.000 mAh
Akụkụ 147.3 x 71.5 x 7.99 mm
Ibu ibu 149 grams
Ahịa 149 euro
Ke ofụri ofụri, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ a dịtụ mfe version nke Moto G7, na okwu nke ya oru nkọwa. Ebe ọ bụ na atụmatụ nke ekwentị dị iche. Motorola ahọrọwo ọkwa na ekwentị ndị a, na nke a na nke ọdịnala, Nnukwu. Ihe nke nwere ike ọ bụghị ndị ọrụ niile ga-amasị. Mana nke ahụ kwekọrọ na ihe anyị na-ahụ na nkebi a taa.
Igwefoto ahụ ka dị otu ihe mere n'afọ gara aga. N'ihi ya, ọ dịghị ihe ijuanya na nke a. Batrị ahụ ka bụ otu ihe ahụ niile, yana 3.000 mAh, nke ahụ na-abata na ụgwọ ngwa ngwa, dị ka ụdị ndị ọzọ dị na ezinụlọ a. Ma ọ bụghị ya, nhọrọ nke nhazi na ngwaọrụ ahụ bụ ihe ijuanya.
N'ihi na Motorola ahọrọla usoro nhazi dị ike na Moto G7 Play, otu ihe ahụ G7 nwere, ihe bụ snapdragon 632. Ọ bụ otu n'ime usoro ntanetị kacha adị n'etiti etiti na gam akporo, mana ọ ka mma na afọ gara aga. Ya mere, a na-atụ anya ịrụ ọrụ dị mma site na ihe nlereanya a nke ika.
Nkọwapụta Moto G7 Ike
Na ebe nke abụọ anyị ga-ahụ ama ọhụụ ọhụụ a. Ọ bụ ihe nlere anya, dịka anyị nwere ike ịkọ site na aha ya, pụtara maka batrị ya. Nke a Moto G7 Ike bụ ekwentị nọ nso na batrị kachasị elu, na ikike 5.000 mAh. Ya mere, egosiri ya dị ka ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ na-achọ ụdị nwere nnwere onwe dị ukwuu. Ndị ọzọ nkọwa ya nwere ike ịhụ n'okpuru:
Nka na ụzụ nkọwa Motorola Moto G7 Ike
Nlereanya Moto G7 Ike
Usoro njikwa A gam akporo 9 achịcha
Ihuenyo IPS 6.2 sentimita asatọ na mkpebi HD + (pikselụ 1.5612 x 720)
RAM 3 / 4 GB
Nchekwa n'ime 32/64 GB (Nke a na-agbasawanye ruo 256 GB)
Igwefoto na-aga n'ihu 12 MP nwere oghere f / 2.0 ikanam Flash na PDAF
Njikọ Bluetooth 4.2 GPS FM Radio WiFi 802.11 ac 4G / LTE Dual SIM jaak 3.5mm ekweisi
Batrị 5.000 mAh na Turbo Charge
Akụkụ 159.4 x 76 x 9.3 mm millimita
Ibu ibu 193 grams
Ahịa 209 euro
Fourthdị nke anọ dị na nsochi ahụ bụ ngwakọ n'etiti G7 na G7 Play n'ụzọ ụfọdụ. Ọ bụ ezie na nke a Moto G7 Ike na-abịa na ụfọdụ iche. N'otu aka, ọ bụ naanị otu n'ime nso dị na nchịkọta dị iche iche nke RAM na nchekwa dị n'ime. Ihe nwere ike igbanye mmasị n'etiti ndị ọrụ ndị ọzọ na ekwentị.
Na usoro nke nha ọ dị ka G7, ọ bụ ezie na iji ọdịnala notch ihuenyo dị ka nke G7 Play. Ha na-akụkwa otu igwefoto n’akụkụ nke ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ na-abịa na ihe mmetụta mkpịsị aka dị ka ndị ọzọ na mpaghara ahụ. N'ihe niile, ejirila ihe mkpịsị aka azụ. Dị ka anyị kwurula, batrị nwere ikike 5.000 mAh, nke na-abịa na ika ngwa ngwa.
Dị ka ha kwuru si Motorola, batrị nke ekwentị sụgharịrị ihe dị ka awa 60 nke iji ya eme ihe. Na mgbakwunye, ekele maka ụgwọ ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ, nke bụ 15 W, ị nwere ike ịnweta ihe dị ka awa itoolu nke ndụ batrị na naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke elekere ịkwụ ụgwọ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ akụkụ ga-eme ka mmasị na ụdị a. Na mgbakwunye na ezigbo ọnụ ahịa ya maka ego.
Motorola agwala anyị na ihe niile gbasara ndị a Moto G7 Play na G7 Power. Na mgbakwunye na nkọwa ya, anyị nwekwara ọnụahịa na ụbọchị mbido nke ụdị abụọ ahụ na Spain. Dị ka ụdị ndị ọzọ, ọ ga-ewere ọnọdụ n'ime obere oge.
N'ihe banyere Moto G7 Power, ọ bụ naanị kwuru na ọ ga-eme n'izu ndị na-abịanụ. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ụbọchị ọ bụla maka ikpe gị, n'ezie n'etiti Febụwarị na Machị, a ga-ebupụta ya n'ụlọ ahịa na Spain, ebe naanị ụdị 4/64 GB rutere na ọnụahịa nke euro 209. Enwere ike ịzụta ya na Ceramic Black, Marine Blue na Iced Violet Gradient agba.
N'aka nke ọzọ enwere Moto G7 Play, nke a ga-ebido na March na Spain. Ọ na-eme ya na ọnụahịa nke euro 149, ya mere, ọ bụ ọnụ ala nke usoro ahụ dum. N'okwu gị, a ga-ebupụta ya na agba abụọ, nke bụ ọla edo na ụda indigo gbara ọchịchịrị, dị ka Motorola gosipụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Moto G7 Play na Moto G7 Ike: ụlọ ọrụ ọhụrụ abụọ ahụ adịghị ọnụ ọnụ
Otu esi emepụta otu akwụkwọ mmado maka WhatsApp nzọụkwụ site nzọụkwụ. (onyonyo nwere nghọta na ederede)
Moto G7 na Moto G7 Plus: Motorola na-emegharị etiti ya